Nsuku zonke, iningi lethu ibhekene ukukhangisa ku-intanethi, kodwa bambalwa kithi owaziyo ukuthi kunemibandela ihlukaniswe izinhlobo ezimbili ezahlukene.
Njengomthetho, avame sizobe ubone izikhangiso inhloso kabani main ukuheha uquqaba ezibanzi zabantu (abathengi) kanye yokuthengisa kwezimpahla noma amasevisi athile. izikhangiso ezinjalo zibizwa ngokuthi ukuba "ukuthengisa". Kusukela ngaleso sikhathi ngokuvamile kuqala, izinkampani eziningi ukuthi unqume ngokushesha ukuheha abathengi ezingaba khona futhi ngenxa yalokho, ukuze uthole inzuzo yabo.
Nokho, kukhona ukukhangisa isithombe, injongo eyinhloko okuyinto - kwasekuqaleni ukwakha isithombe esihle inkampani yakho futhi ezinokwethenjelwa amakhasimende abanesithakazelo imikhiqizo yenkampani. Kufanele wathi umphumela kuleli cala, ekugcineni kwahlaluka ukuthi iphakeme kakhulu kunanoma ezintweni azithengisayo zezimpahla ukukhangisa. Ngakho-ke, manje, izinkampani eziningi ukhathazekile mayelana nokuthi uwakha kanjani umfanekiso omuhle wokuqala, futhi ngemva kwalokho, ngenxa yalokho, ukwandisa yokuthengisa.
Ngakho yokubeka uphawu - nguye kuyadingeka ukudala umbono esimeme omuhle abathengi mayelana nenkampani sisonke yonke imikhiqizo yayo. Ngamanye amazwi, kubalulekile ukuba labo amafemu ambitious ukuthi unqume ukuthatha isikhundla futhi zikufice izimbangi zabo kuzo zonke izikhundla, okufaka ngokuya yokuthengisa kanye nenani amakhasimende.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukukhangisa isithombe has umphumela eside oyibamba, futhi, naphezu kweqiniso lokuthi umphumela iyabonakala ngokushesha, kodwa kudinga isikhathi esithize, it is, nokho, kuzozwakala isikhathi eside. Ukuze ufinyelele kulesi edingekayo ukuze afeze uphinda kukhuthazwa nokuxhumana nge kanti nabantu abahlosiwe. Ngeshwa, abakhangisi akuzona njalo ujwayelene izici zalesi hlobo lwesikhangiso futhi owazi ngalezi "izingibe".
Image ukukhangisa kuhlanganisa amakhalenda ahlukahlukene yenkampani, omagazini, izincwajana, ukukhiqizwa isikhumbuzo (ngokuvamile inkampani logo). Futhi kudala isithombe omuhle inkampani iqhaza imicimbi yamasiko kanye esiza abantulayo, kungaba ukwandisa inani layo emehlweni omphakathi kanye abathengi.
Ngokungangabazeki, nqampuna umhlabeleli futhi iningi imithelela mass ukukhangisa kumabonakude. TV iqoqa phambi zesikrini zabo inani Amazing abantu, ngakho-ke, ukuze abonise le izilaleli yiluphi ulwazi ngalesi sikhathi ubhekwa indlela ezikhiqiza kakhulu.
Dala commercial kwesokudla - kuyikhono, ngoba umsebenzi oyinhloko abakhangisi - ukukhiqiza umphumela oyifunayo. Ngakho, into eyinhloko ukubiza kumbuki, okuyilokho, eqinisweni, kuyinto engase ibe iklayenti izinkampani, imizwelo. It ivumela umuntu ukuba akhumbule ini futhi sihlobanise bomkhiqizo into ngokomthetho ezihlotsheni nakubangane. Ikakhulukazi lo mphumela inamatsiselwe phinda. Esikhathini esizayo, kakade ezingeni esesimweni sokungaphili ngokuphelele, nge ilogo yenkampani, noma nje bebona imikhiqizo emashalofini, abantu kabusha ukuzwa imizwa kanye ubona phambi into ajwayelekile, abathembekile futhi ngokungazi badonsekela ukuthi brand ukubonwa. Kuyindida ngisho imizwelo engafanele umuntu akwazi ukuzwa ngesikhathi izimakethe nomphumela ofanayo omuhle, kuthinta umsebenzi imikhiqizo yokuthengisa.
Ngithanda ukusho amazwi ambalwa mayelana yesimanje okwenziwa umuntu ukuxhumana futhi wamukele noma iluphi ulwazi World Wide Web. Akumangalisi-ke ukuthi lapha ithole ukukhangisa. PR ku-inthanethi - lena ngenye indlela ephumelelayo ekukhulumisaneni okuphumelelayo namakhasimende. Inzuzo elingenakuphikwa yikhono uthole impendulo evela kumakhasimende ezingaba khona. Ethandwa kakhulu amabhulogi okuthiwa, lapho abasebenzisi abaningi bathola nethuba ukuze baxoxelane okuhlangenwe, izindaba, ukubuyekezwa, njll Ngakho-ke, kukhona "blogosphere" namuhla, okuletha ndawonye eziningi ezahlukene amasayithi, blogs, njll izithakazelo ezifanayo nokuzilibazisa.
Indlela yokwenza brand siqu?
Donna Karan - e amaphupho enhle
Impensheni yeminyaka yobudala iqukethe? Ukubalwa kwempesheni
Almond futhi izakhiwo zalo
"Crazy" izibambo: azakhele Chainsaw